Blended (2014) – MM Subtitles
Video Sources 2536 Views Report Error
Single Dad, No Clue. Single Mom, Flying Solo.May. 21, 2014USA117 Min.PG-13
Blended ဟာ 50 First Dates နောက်ပိုင်းမှာ Adam Sandler နဲ့ Drew Berrymoore တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်တာဟာ ဒါနဲ့ဆို တတိယဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Adam Sandler ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ခပ်မြူးမြူးသရုပ်ဆောင် ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Adam Sandler ကတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင်အဖြစ်နာမည်ကျော်ပြီး Legend of Zohan , Grown Ups , Click အစရှိတဲ့ဇာတ်ကားများမှာလူသိများပါတယ် ။
Drew Berrymoore ကတော့ အများသိ Charlie Angle မင်းသမီးဖြစ်ပြီး ပေါတောတော ဇာတ်ရုပ်ကို အထူးသရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီဇာတ်ကားအစမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်နေထိုင်တတ်တဲ့စရိုက်ကိုယ်စီရှိကြတဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲ ပြီး ကလေးတွေကို တစ်ဦးတည်းစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးချိန်းတွေ့ ကြတဲ့အခါမှာတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ အဆုံးသတ်နဲ့ကြုံရပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာပဲ သူတို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှ မချိန်းတွေ့တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ် ။ ထိုသို့ကိစ္စတွေ ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပေမယ့်လဲ တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ဟာ အာဖရိက ဆာဖာရီ အပန်းခြေခရီးကို သူတို့မိသားစု အသီးသီးနဲ့အတူတူ လိုက်ပါသွားကြပါတော့တယ် ။
အပန်းဖြေခရီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ မိသားစုခန်းကြီးတစ်ခုကို အတူ ခွဲေ၀ နေထိုင်ရမဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာကို တွေ့ရှိရမှာပါ ။
IMDb Rating 6.5 114,136 votes
TMDb Rating 6.7 2,107 votes
Download 480p G Drive 412 MB
Download 480p Yandex 412 MB
Download 480p MyanCloud 412 MB
Download 720p G Drive 711 MB
Download 720p Yandex 711 MB
Download 720p MyanCloud 711 MB
Download 1080p G Drive 1.5 GB
Download 1080p Yandex 1.5 GB
Download 1080p MyanCloud 1.5 GB